UEFITool: ongorora, gadzirisa, uye bvisa firmware mifananidzo | Linux Vakapindwa muropa
UEFI Yakauya kugadzirisa zvimwe zvinokanganisa uye matambudziko eBIOS. Iyi standard yakawedzeredzwa kupfuura x86 mapuratifomu, uye mamwe akawanda akaisikidza rutsigiro rwayo mune yavo ecosystems, senge nyaya yeRISC-V sekukuzivisa kwatakaita kubva kuLxA nguva yadarika. Ndosaka zvichinakidza kuziva maturusi senge UEFITool.
Kana iwe uchida kushanda nemifananidzo ye firmware, zvirokwazvo chishandiso ichi chinokubatsira zvakanyanya. Iyi purogiramu yakarongedzwa muC ++ uye ichishandisa Qt, yakavhurwa sosi uye muchinjika-chikuva. Naiye unogona ongorora, bvisa, uye gadzirisa UEFI firmware mifananidzo.
Inotsigira iyo manejimendi manejimendi Pedzisa maBIOSes nenzira yakasununguka, kutanga neiyo flash tsananguro kana chero bhaisikopo faira rine UEFI mavhoriyamu. Iwe unongofanirwa kuitangisa pasina chero nharo kubva kumutsara wekuraira kana nenharo inoratidza nzira yeEFI yemufananidzo faira iwe yaunoda kuvhura pakutanga.
Kana izvo zvapera, iwe uchaona kuti iro hwindo rebasa rakakamurwa kuva matatu makuru mapaneru:
Maitiro: muti wezvinhu une mazita akasiyana, mhando uye zvidiki zvinoratidzwa. Kana paine chero chinhu chakasarudzwa ...
Mashoko:… Ruzivo rwepaneru rucharatidza ruzivo rwuripo pamusoro pechinhu chakasarudzwa zvichibva parudzi rwayo nezviri mukati.
Mirayiridzo- Inotaridza meseji dzese kubva kuinjini, kusanganisira mhedzisiro yekutsvaga uye yambiro mamiriro. Mazhinji mameseji anogona kudzvanywa zvakapetwa-sarudza chinhu chakakonzera meseji kuti ikurumidze kuona.
Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuvhura menyu mukati chinhu chimwe nechimwe kubva pamuti kuti uone mashandiro anogona kuitika, ayo anosanganisira kuburitsa (kwechinhu nemusoro wayo, kana chete data rezvinhu), kuiswa, kutsiviwa, kubviswa uye kuvakwazve izvo zvinhu zvinoiswa pakuvaka uye nekuregeredza izvo zvisiri).
Iwe zvakare une basa rekutsvaga mune iyo UEFITool menyu, kutsvaga zvinhu zvemuti zvichibva pane yavo chaiyo hex pateni, nezvimwe. Kana chimwe chinhu chikawanikwa, chichawedzerwa kubhodhi remashoko.
Mamwe mashoko - UEFITool purojekiti saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » UEFITool: ongorora, gadzirisa, uye bvisa firmware mifananidzo
WINE 6.4 inounza kuvandudzwa kune DTLS protocol uye mazana ezvakajairika zvigadziriso